Anabolics Steroids alaabooyinka taxanaha budada - AASraw budada
/ Products / Anabolics steroids
Daawooyinka stabdhabyada anabolic steroids, anabolic-androgenic steroids (AAS), waa kala duwanaansho synthetic ee labka ah hormoonka galmada lab ah. Erayga saxda ah ee xeryahaani waa steroids anabolic-androgenic. "Anabolic" waxaa loola jeedaa dhisidda murqaha, "iyo orogenogen" waxaa loola jeedaa sifooyinka lab ah ee lab ah. Qaar ka mid ah magacyada guud ee loogu talagalay budada Anabolic steroids waa Gear, Juice, Roids, iyo Stackers.
Dadka qaarkiis waxay ku dhibaateeyaan anabolic steroids si ay u hagaajiyaan muuqaalkooda jirkooda.
Bixiyeyaasha xanaanada caafimaadka ayaa kuu qori kara steroids si ay ula tacaalaan arrimaha hormoonnada, sida qaangaadhka daahidda. Steroids sidoo kale waxay daaweyn kartaa cudurrada keena muruqyada lumitaanka, sida kansarka iyo AIDS. Laakiin qaar ka mid ah ciyaartoyda iyo jir-dhiseyaashu waxay ku xad-gudbaan daroogooyinka si kor loogu qaado waxqabadka ama kor loogu qaado muuqaalka muuqaalkooda.
Khatarta caafimaad waxaa soo saari kara isticmaalka muddada dheer ama qiyaasta xad dhaafka ah ee AAS. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah isbeddelada halista ah ee heerarka kolestaroolka (lipoprotein-hoosaad hooseeya iyo hoos u dhaca lipoprotein), finan, cadaadis dhiig oo sarreeya, dhaawaca beerka (badanaa badanaa afka AAS), iyo isbeddel khatar ah oo ku yimaadda qaabka kaabaha bidix ee wadnaha. Shuruudaha ku saabsan isu-dheelitir la'aanta hoormoonka sida ginecomastia iyo dhimista xaddiga tijaabada ayaa sidoo kale waxaa sababi kara AAS. Haweenka iyo carruurta, AAS waxay sababi kartaa jahwareer la'aanta.
Ergogenic waxay u isticmaashaa AAS ciyaaraha isboortiga, tartanka, iyo dhiska jirka sida daroogada waxtarka leh ee waxtarka leh waa muran ka dhashay sababtoo ah saameyntooda iyo faa iidada ay ku yeelan karto faa'iido la'aanta tartamada tartanka. Isticmaalkooda waxaa loo yaqaan 'doping' waxaana mamnuucay hay'adaha isboortiga ee ugu waaweyn. Sannado badan, AAS ayaa ilaa hadda laga helay maaddooyinka doping ee ugu badan ee shaybaarada IOC-la aqoonsan yahay. Waddamada AAS ay gacanta ku hayaan maandooriyeyaasha, waxaa inta badan jira suuq madow kaas oo la soo tahriibiyo, qashin lagu sameeyay ama xitaa daawooyinka been abuurka ah ayaa loo iibiyaa dadka isticmaala.
Inta badan dadka isticmaala steroid ma aha ciyaaryahano. Intii u dhaxaysay 1 Million iyo 3 Million (1% dadka) waxaa loo maleynayaa in ay isticmaalaan AAS Maraykanka. Daraasado Maraykan ah ayaa muujiyey in dadka isticmaala AAS ay u badanyihiin inay badi rag dhexdhexaad ah oo ragga da 'yar oo leh da' dhexaad ah oo ku saabsan 25 kuwaas oo ah kuwa jirka ah ee aan dhicin iyo kuwa aan ciyaaraha ahayn oo isticmaala daroogooyinka ujeedooyinka qurxinta. "12 - in wiilasha 17, isticmaalka steroids iyo daroogooyinka la midka ah ayaa ka soo baxay 25 ilaa 1999, iyada oo 2000 boqolkiiba ay sheegeen inay u isticmaalaan si ay u eegaan ciyaaraha isboortiga, daraasad ay samaysay shirkadda caymiska Blue Cross Blue Shield. (Eisenhauer) Daraasad kale ayaa lagu ogaaday in isticmaalka aan caafimaadka ahayn ee AAS ay ka mid yihiin ardayda jaamacadda ay ka yaryihiin ama ka yar yihiin 20%. 1% dadka isticmaala steroid waxay ahaayeen kuwo jidh-baxa ah iyo kuwa aan-cayaaraha ahayn, halka 78.4-da ay sheegeen inay ku dhaqmaan fal-galin aan ammaan ahayn sida dib-u-soo-kabashada cirbadaha, la wadaago cirbadaha, iyo in la wadaago lakabyo badan oo badan, inkastoo daraasad 13 ay ogaatay in wadaagidda baahiyeyaasha Aad ayaan caadi u aheyn shakhsiyaadka isticmaala AAS ee ujeedooyinka aan caafimaad ahayn, oo ka yar 2007%. Daraasad kale oo 1 ah ayaa lagu ogaaday in 2007% dadka isticmaala AAS-ka ee aan helin daawada AAS-ka ay leeyihiin shahaado dugsi sare kadibna qaar kale ay dhamaystireen kuleejka iyo yaraa waxay ku fashilmeen inay dhameeyaan dugsiga sare intii laga filayey dadweynaha. Daraasad la mid ah ayaa lagu ogaaday in shakhsiyaadka isticmaala AAS ee ujeedooyinka aan caafimaadka ahayn ay leeyihiin sicir-dhimista shaqada iyo dakhliga qoysaska ka sarreeya dadweynaha guud. Isticmaalayaasha AAS waxay u arkaan in ay baaraan daawooyinka ay qaataan wax ka badan kuwa isticmaala walxaha la kontoroolo; Si kastaba ha ahaatee, ilaha ugu muhiimsan ee lala tashado dadka isticmaala steroid waxaa ka mid ah asxaabta, buug-gacmeedyada aan caafimaadka ahayn, forum-yada internetka, blogs, iyo majaladaha jirdhiska, kuwaas oo bixin kara macluumaad la is waydiin karo ama aan sax ahayn.
Sidee ayay dadku ula kacaan? Anabolic steroids budada?
Dadka ku xad gudbaya Anabolic steroids badanaa waxay ku qaadaan afka ama waxay ku mudayaan murqaha. Qiyaasahani waxay noqon karaan 10 ilaa 100 ka sarreysa qiyaasaha loo qoondeeyay si loo daaweeyo xaaladaha caafimaad. Steroids sidoo kale waxaa lagu daboolaa maqaarka sida kareem, jel, ama bacteri.
Dhaqaatiirta qaar iyo kuwa kale ee kufsada steroids waxay aaminsan yihiin in ay ka fogaan karaan dhibaatooyinka aan loo baahnayn ama ay kordhiyaan saameynta maandooriyaha iyaga oo qaadaya siyaabaha ay ka mid yihiin:
baaskiil-qaadashada qiyaasta mudo gaaban, joojinta wakhti, ka dibna dib u bilow
Isticmaalidda-laba-ama ka badan noocyada kala duwan ee steroids
Haramaynta - si tartiib tartiib ah u kordhiya qiyaasta ama xad-dhaafka xad-gudubka, helitaanka qaddarka ugu sarraysa, ka dibna si tartiib ah u xoqid
Cudurrada Anabolic-androgenic (AAS) ayaa ah noocyada synthetic ee hormoonka hormoon ee hormoon ee hormoonada leh oo leh adeeg caafimaad oo sharci ah. Marka sharci ahaan loo qoro oo kormeero bixiye caafimaad, Anabolic steroids budada ayaa loo tixgeliyaa daawooyin ammaan ah iyo daaweyn.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan isticmaalka daroogooyinka ayaa ka mid ah kuwa jidh-dhiska iyo cayaaraha si loo xoojiyo xooggooda muruqa ama muuqaalka. Xadgudubka AAS ee culus ayaa sababi kara dhibaatooyin caafimaad oo xun, mararka qaarkoodna aan laga bogsan karin, marka lagu daro wadne garaaca wadnaha, stroke, niyadjab iyo dabeecad aad u daran.
Isku day inaad AAS ka isticmaasho shirkad sax ah macnaheedu waa inaad qaadato tayada tayo fiican AAS, karsan AAS tablet / capsule ama saliidda lagu muday shuruudo adag oo keeni doona caafimaadkaaga khatarta.
Muujisid 1-8 natiijada 46
Sort by cusaybka
Kala soocida Default
Sort by caan
Sort rating celcelis by
Sort by qiimaha: hooseeyo si ay sare
Sort by qiimaha: sare si ay u hooseeya
Price caanka Rating
Muuji Sheyada 8
Muuji Sheyada 16
Muuji Sheyada 24
Budada Trenavar (4642-95-9)
Budada diinolone (6218-29-7)
Budada stenbolone (5197-58-0)
Budada Mibolerone (3704-9-4)
Trenbolone Acetate (Tren ace) budada
qiimeeyay 3.00 out of 5
Nandrolone laurate budada
LGD-4033 (VK5211) budandrol budada ah
Phenylpiracetam (Carphedon) budada
DECA budada-Ultimate Guide Sida loo sameeyo Nandrolone Decanoate (Durabolin)
Sidee loo Isticmaalaa Qorshaha Trenbololone si uu u qaso Trenbolone Enanthate budada 2019
2019 Sida loo sameeyo testosterone si aad uhogaliso xannibaadaha 6
Boldenone Undecylenate: 8 Saameynaha Waxyeelada Waxyaabaha Aad Doonayso Inaad Ka Badbaadisid